यि बाबुछोरा जो रुकुम घ’टनाका पिडितको पक्षमा नि:शुल्क अदालतमा ल’ड्दैछन – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/यि बाबुछोरा जो रुकुम घ’टनाका पिडितको पक्षमा नि:शुल्क अदालतमा ल’ड्दैछन
रुकुम पश्चिम – बुवा डा. नवराज गौतम र छोरा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम (आरसी) । पेशा दुवै जनाको अधिवक्ता​। दुवै बाबुछोराले अ’दालतको बेन्चमा बसेर एउटै घ’टनामा बहस गर्ने संयोग जुरेको छ यतिबेला । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चर्चामा रहेको रुकुम पश्चिमको सोती घ’टनाका पी’डितको पक्षमा नि:शुल्क बहस गर्न उभिनु भएका उहाँहरुको जस्तै संयोग पारिवारिक जीवनमा कमैलाई पर्न सक्छ ।
दुवै बाबुछाेराले शुक्रबारदेखि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा प’ीडितको पक्षमा एउटै बेन्चमा नि:शुल्क बहस गर्दै हुनुहुन्छ । गत जेठ १० गते चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोतीमा​ ६ जनाको ज्या’न जाने गरी भएको घ’टनाको शुक्रबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएकाे हाे बहसको लागि वादी र प्र’तिवादी पक्षमा बहस गर्न धेरै अधिवक्ताहरू रुकुम पुगेका छन ।
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नंं. १ घर भएका आरसी गौतम पनि काठमाडौंबाट पीडितको पक्षमा बहस गर्न रुकुम पुग्नुभएको हो । काठमाडौ कार्यक्षेत्र बनाएर बहस गर्दै आउनुभएका आरसीको लागि यो घ’टनाको बहस ऐतिहासिक अ’नुभव बन्नेछ ।
आरसीले बहस गर्न थालेको सात बर्ष पुग्यो । “जन्म दिने बाबा सँगै पहिलो पटक प’ीडित पक्षको तर्फबाट बहस गर्दैछु, मेरो लागि यो नयाँ अनुभूति पनि हुनेछ” आरसी भन्नुुहुन्छ,’हामी दुवैजना पी’डितको तर्फबाट नि:शुल्क बहस गर्दैछौं‌ ।आरसी बुवाकै प्रेरणाले कानूनी क्षेत्रमा लाग्नु भएको हो ।
आरसीका बुवा नवराज वरिष्ठ अधिवक्ता तथा रुकुमको पहिलो विद्यावारिधी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले २०३६ सालदेखि रुकुम जिल्लामा बहस गर्दै आउनुभएको छ ।
सोतीको दुःखद घ’टनाले बाबुछोरालाई सँगै बहस गर्ने अवसर जुराइदिएको छ । “यो पेशा हो, यो घ’टनामा बाबुछोरा पीडि’तको पक्षमा बहस गर्दैछौं’ डा. नवराज भन्नुहुन्छ, “समयले कहिलेकाहीँ बाबुछोरालाई वादी र प्रतिवादीको पक्षमा ब’हस गर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।” तर, यसपटक बाबुछोरालाई सँगसँगै वकालत गर्ने नयाँ अनुभव हुनेछ ।